गिरीजाप्रसाद कोइराला स्मृति करातेमा न्यु लिरा च्याम्पियन - Nepal's Digital News Paper
गिरीजाप्रसाद कोइराला स्मृति करातेमा न्यु लिरा च्याम्पियन
प्रकाशित मिति : शनिबार, बैशाख १४, २०७६
काठमाडौं । न्यु लिरा स्कुल छैटौं राष्ट्रिय खुला गिरीजाप्रसाद कोइराला स्मृति कराते प्रतियोगिताको स्कुलतर्फ शुक्रबार टिम च्याम्पियन बनेको छ ।
नेपाल सितोरियो कराते संघ, शाखा डोजो लैनचौरद्वारा आयोजित प्रतियोगितामा न्यु लिराले १० स्वर्ण, १२ रजत र २ कांस्य जित्दै टिम च्याम्पियन बन्यो । ९ स्वर्ण, ८ रजत र १३ कांस्यसाथ सिद्धी गणेश दोश्रो भयो । तेश्रो भएको माउन्ट गौरीशंकरले ८ स्वर्ण, १३ रजत र ९ कांस्य हात पा¥यो । चौथो स्थानको नाइटिङगेलले ८ स्वर्ण, ६ रजत र २९ कांस्य प्राप्त ग¥यो ।
प्रतियोगिताको नार्गाजुन नगरपालिकाका मेयर मोहन बस्नेतले एक कार्यक्रमबीच उद्रघाटन गरे । राष्ट्रिय टेबलटेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा भइरहेको प्रतियोगिताको अन्तिम दिन शनिबार खुलातर्फ प्रतिस्पर्धा हुने आयोजक डोजोका प्रमुख रामकुमार थारुले जनाएका छन् । प्रतियोगिताअन्तर्गत स्कुलतर्फ ४० स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा भएको थियो भने खुलामा १८ स्पर्धामा भिडन्त हुनेछ । दुवैमा मिलाएर जम्मा ७ सय १३ खेलाडी सहभागी छन् ।
सर्वाधिक महंगा फुटबलरमा एम्बाप्पे, शीर्ष १० मा परेनन् रोनाल्डो र नेइमार
भारतीय पूर्व क्रिकेटर चन्द्रशेखरद्वारा आत्महत्या
तारादेवी र पुकार स्ट्रंगेस्ट खेलाडी घोषित
अन्तत: सरकारको पहलमा सन्दीप लामिछानेले अमेरिकाको भीसा पाए
अमेरिकी दूतावासद्वारा सन्दीपलाई भिसा दिन अस्वीकार
म्याग्दीमा चट्याङ पर्दा ६१ भेडा मरे, १० लाख बराबरको क्षति
लोकसेवाले थप ६ हजार कर्मचारीको बिज्ञापन खोल्दै, अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भेट्दै
कर्मचारी र जनप्रतिनिधि धमाधम विदेश, भ्रमणपछि उपलब्धी सुन्य
द्धन्द पीडितका नाममा लुट : डेढ लाखको थर्मस, ५५ हजारको तौलिया
नेकपामा शक्तिशाली वामदेव !
बाल मन्दिरका निर्देशककै योजनामा बेचिए शिशु !
जबज जोगाउन नेकपाभित्र राष्ट्रपति सक्रिय, झलनाथ र बामदेव खुसी, प्रचण्ड भ्रमित
पेस्तोल र गोलीसहित पक्राउ
कालिकोटका पहाडमा मुख्यमन्त्री शाही मोटरसाइकल हुँइकिदै (फोटो फिचर)